Kachasị mma n'ihu breeki caliper mbanye draịva maka Ford F150 emeputa na Factory |KTG
N'ihu breeki caliper mbanye draịva maka Ford F150
Mara ihe banyere Iron Caliper
Sistemụ breeki ọgbara ọhụrụ n'ime ụgbọ ala na-abụkarị nke igwe nkedo.Igwe breeki igwe siri ike nke ukwuu ka achọrọ ya iguzogide ike dị elu site na ntụgharị, mgbanwe ọkụ dị elu site na esemokwu, na nrụgide dị elu Kama hydraulics, a na-eji ntụgharị nrụgide nke ụkwụ gị megide pedal breeki ka ọ bụrụ nnukwu n'ime breeki calipers.Mgbe a na-agba breeki, a na-edobe caliper na nrụgide hydraulic nke nna ukwu cylinder na-ebufe na ike mmeghachi omume nke breeki pads na ya.N'otu oge ahụ, okpomọkụ dị elu nke esemokwu na okpomọkụ nke breeki na-emepụta ga-emetụtakwa calipers ugboro ugboro.Ọ bụ ezie na okpomọkụ dị elu na nrụgide n'oge usoro mmegharị ahụ agaghị emebi caliper, ụfọdụ nrụrụ ga-eme, n'ihi ịdị adị nke ike ike ígwè.Igwe nrụrụ nrụrụ ga-eme ka arụmọrụ breeki ya belata, ọ na-enwekwa ohere maka ọnọdụ dị iche iche dị ka enweghị nrụrụ aka.Calipers breeki emechiela nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na oke arụmọrụ ha na-ebute ịrụ ọrụ breeki adịghị mma.Ịwụnye calipers ọhụrụ ga-eme ka arụmọrụ ụgbọ ala gị dịkwuo mma, na ha ga-enye nkwado siri ike na nke dị nchebe na breeki, na-enye ha aka karịa na rotors breeki.
Ebe: Akụkụ Ndị njem Ọkwọ ụgbọala n'ihu
Ntụaka akụkụ Nọmba: 18-B5404 18-B5405
Ọnụọgụ Caliper Piston: 2-Piston
Ihe piston: phenolic
ndetu: 3/8 x 24 na. Bleeder Port Size;M10 x 1 Oke Ọdụ ụgbọ mmiri;2.12 n'ime OD Piston nha;
Ngwọta dị n'elu dị mkpa maka ụlọ na bracket caliper breeki ígwè.Iji chebe breeki nkedo megide corrosion ma melite ọdịdị anya ha, a na-ejikarị ihe mkpuchi galvanic emecha ụlọ ndị a dị ka zinc ma ọ bụ zinc-nickel, ma ọ bụ agba.
Aha ụgbọ ala
Enyere ya na mgbakwụnye mgbakwasa
Nke gara aga: Akụkụ nke breeki diski azụ azụ maka njem Dodge
Osote: Igwe anaghị agba nchara Trailer Hydraulic Disc Brake Caliper
Caliper eburu ọkara Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Teal breeki Calipers Caliper edoziri Caliper Saab Jak Brake Caliper